Ihe ndozi emb Ntuziaka komputa / icho mma nke mgbasa ozi na uwe oru
E nwere ọtụtụ ụzọ esi achọ mma, usoro ọhụụ nwere ike ịmegharị ọtụtụ mmadụ mgbe ha chere nhọrọ ha ihu. Mkpebi na ụdị akara ahụ dabere n'ọtụtụ ihe. Ikpebi ihe ejiji akwa ma ọ bụ akwa maka ibi akwụkwọ nwere ike inyere anyị aka ịhọrọ otu usoro. Agbanyeghị usoro akara ị họọrọ, ịkwanye ihe ntanye ka bụ usoro kachasị mma.
Oldestzọ kacha ochie nke ịchọ mma
Ihe mkpuchi Mara amara maka ọtụtụ puku afọ maka ọdịdị nke eluigwe na ala, ọ ka dị mkpa oge niile. N'ihi ya, akwa ndị a kpara akpa na-adị mma nke ukwuu ma na-ekwe nkwa ogologo ndụ karịa akwa ndị eji usoro ndị ọzọ achọ mma.
Okpu nwere eserese ejiri ihe omuma kọmputa mee
Cochọ mma maka oge ọ bụla
Nke anyi mbinye aka emekọ na-eme ka inogide na irè ndozi na ọrụ na uwe mgbasa ozi, yana nkwari akụ na akwa gastronomic. Anyị nwere ogige ntụrụndụ nke anyị, nke na-enye anyị ohere ịkwado ọnụ ahịa asọmpi na oge nnyefe dị mkpirikpi.
Anyị na-eme ike ọ bụla iji mezue iwu ọ bụla. Ndị otu anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka ịhọrọ ngwaahịa yana usoro ịchọ mma. Anyị na-enyekwa ọrụ ngwugwu uwe.
Ogbugbu ihe mkpuchi kọmputa choro nzụta ihe eji achọ okike. Usoro a na-akwadoro maka obere eserese nha. Ozugbo a zụrụ usoro ihe eji arụ ọrụ, ọ na-adị na nchekwa data anyị maka ọdịmma, yabụ mgbe ịlaghachikwutere anyị na usoro ọzọ, agaghị akwụ gị ụgwọ maka nkwadebe nke otu mmemme ahụ nke ugboro abụọ. Ọ bụ ụdị ịchọ mma mara mma na enweghị mgbe ọ bụla.
Ọ bụ ezigbo kụrụ maka ndị na-etinye anwụ ngwa ngwa na nke mbụ. Apụta nwere ọbụna afọ mgbe e mesịrị ya anya phenomenal. Nke a ga - eme ka afọ ju ndị na - eche maka ihe ụlọ ọrụ ha. Isdị mbipụta akwụkwọ a na-atụ aro maka uwe a na-asacha ugboro ugboro nke na-ekpughere ndị na-asa ahụ siri ike.
Usoro itinye ihe ịchọ mma na kọmputa
Eserese ihuenyo bụ ihe eji achọ mma nke ụdị mbipụta bụ ndebiri etinyere na ntupu. Enwere ike iji ntupu rụọ igwe ma ọ bụ eriri sịntetik. Amepụta otu mejupụtara agba site na ọnwụ. Screenmepụta mbupute ihuenyo bụ nzụta matriks maka ibi akwụkwọ.
Nke a bụ azịza zuru oke mgbe ịchọrọ inweta mmetụta nke agba kemmiri mgbe ịnọgide na-enwe nkenke na nkwụsị abrasion. Ihe oru a emechara gha sie ike ruo otutu izu ma obu obuna onwa.
A na-eme ọrụ ọ bụla dị ka ihe ndị ahịa chọrọ si dị. Oge ọ bụla anyị na-agbanwe ngwaahịa ahụ n'ihe gbasara grammage yana ọnọdụ nke eserese ahụ na nkwekọrịta ya na onye ahịa ya. Mgbe ụfọdụ, anyị na-agbanwe nhazi ahụ site na nkwenye nke onye ahịa iji nweta nsonaazụ kacha mma.
Enwere ike igosipụta ederede ihuenyo ọ bụghị naanị na uwe, kamakwa na ngwaọrụ ndị ahọrọ
Dezie ya site na DTG
DTG mbipụta ma ọ bụ "Direct To Garment" bụ a oge a kpọmkwem mma nke akwa na uwe. Usoro DTG na-enye gị ohere itinye ihe eserese ọ bụla na akwa owu ma ọ bụ owu nwere ngwakọta nke elastane / viscose. Ejiri eserese pụrụ iche mepụta eserese. Mbipụta site na usoro DTG na-eme ka mmeputa zuru oke nke agba yana ntụgharị agba. Printing kwere omume na-enweghị mkpa iji kwadebe a haziri si na otu iberibe.
Ọdịdị nke mbipụta DTG dabere n'ọtụtụ ihe. Nke mbu, na ihe nlere anya na akuku nke akụrụngwa - ihe ohuru ohuru, nke ka mma na oru. Ihe ọzọ na - eme ka ike gwụ anyị bụ ụdị agba eji eme ya, akwa a na - ebi ebi na nka onye ọrụ.
DTG ebi akwụkwọ, ekele ya ọhụrụ, ike ga-eji ma n'ihi na ọtụtụ mmepụta na maka mmepụta site na otu ibe. Nke a na-enyere Mbipụta Mbipụta tupu ịmalite dum usoro. Ọ bụkwa nhọrọ dị mma maka ụbọchị ọmụmụ, agbamakwụkwọ ma ọ bụ onyinye ncheta ahaziri iche. Maka ụlọ ọrụ, ọ bụkwa azịza dị mma ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ka onye ọrụ ọ bụla nwee aha ha ma ọ bụ aha ọrụ na uwe ha. Otu ihe a metụtara uwe, dịka maka uwe klọb egwuregwu, ebe a na-ebipụta nọmba dị iche iche na uwe elu ma ọ bụ obere uwe.
Onye nbipute ọhụrụ Nwanna DTXpro Bulkna anyị abawanyeala igwe akụrụngwa anyị site na ya, bụ ụdị na - agbanwe agbanwe ma na - eme ọtụtụ ihe. Ekele ya, ị nwere ike ịgbasa ụlọ nkwakọba ihe gị na ngwaahịa ndị ahaziri iche dị ka Uwe maka onye ọ bụla nwere aha ya, aha ọrụ, akpa mgbasa ozina ọbụna akpụkpọ ụkwụ nwere ihe osise gị uka n'ọtụtụ yana amachi usoro.
Anyị na-echekarị banyere onyinye puru iche maka ndị a hụrụ n’anya n’oge ekeresimesi, Ista, ụbọchị nne ma ọ bụ ncheta ọmụmụ. Anyị chọrọ ka onyinye anyị pụta ma nọrọ ogologo oge
Iji mee ka ọ mee, ọ bara uru iche echiche banyere onyinye ahaziri iche, ọtụtụ mgbe ndị bara uru abụghị naanị na-akpali ncheta dị mma, kamakwa na-eje ozi ogologo oge.
DTG obibi akwụkwọ anaghị achọ nkwadebe oru ngo nke bụ otu n'ime isi uru ya (dị ka ọ dị na mbipụta ihuenyo ma ọ bụ mkpuchi kọmputa). Enwere ike ibipụta eserese ma ọ bụ ihe ederede site na otu ibe, na-ebipụta foto dị adị ma kachasị ewu ewu maka onyinye, mana ọ dị mkpa na foto ahụ dị na mkpebi kachasị elu. Ndị ụlọ ọrụ mgbasa ozi ji ịnụ ọkụ n'obi ahọrọ mbipụta DTG n'ihi na ejiri obere ego na nkwụsi ike mara ya, nke kachasị mkpa mgbe ị na-ahazi uwe ma ọ bụ akwa maka ihe omume dị iche iche ma ọ bụ dị ka onyinye maka asọmpi.
anyị na-agba gị ume ka ị Earlmee na ọrụ anyị ụlọ ahịandị ga-enwe obi ụtọ ịza ajụjụ gị na-enye a free marking quote.
sweatshirts na njirimara Allegrosweatshirts na ahaihe mkpuchi kọmputaAkara T-shirtsuwe elu akaraUwe nwere logoUwe nwere mbipụtaajị anụ ya na akaraIhu akwụkwọicho mma uweịchọ mma uweakara uweakara uwe